Izany dia mahakasika ny fisolokiana avo lenta izay mitentina miliara ariary. Nalain’ny volan’olona kanefa tsy nomeny ny tany. Efa misy koa ny fangatahana eny anivon’ny fampanoavana ambony ny tsy hahafahan’io kandidà io mivoaka ny sisin-tany. Tsy ho ela dia ho lasa toerana fieren’ny Mafia ny antenimieram-pirenena.
MIARO TENA NY CENI
Miaro tena fatratra ny CENI fa efa mandray fepetra manoloana ny tsy fanarahan-dalàna ataon’ireo kandidà milatsaka hofidiana solombavambahoaka. Tsikaritra anefa fa mbola betsaka ihany ireo mametaka afisy eny amin’ny toerana tsy tokony hametrahana izany amin’izao. Mitentina 200.000 ariary ny onitra aloan’ireo kandida izay voasazy amin’ny fametahana afisy tsy ara-dalàna. Amin’izao anefa dia tsy manana antontan’isa amin’ireo tsy manara-dalàna ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana.
“TENA MISY NY KANDIDAM-PANJAKANA”
Tena misy ny kandidam-panjakana ary mahatonga ny tsy fitovian’ny herijika eo amin’ireo samy hilatsaka hofidiana, hoy ny vondron’olon-tsotra. Hita miharihary tanteraka amin’ireo kandida ireo ny fanohanana sy fironan’ny filoham-pirenen, hoy i Zoé Sarah, filohan’ny VOT na ny Vondron’Olon-Tsotra. Lasa solombavan’ny filoham-pirenena ireo kandidà ireo fa tsy tena solombavambahoaka raha mbola manohy ny fironana be amin’ny filoha tahaka izao.
FANABEAZANA OLOM-PIRENENA TSY AMPY
Tsy ampy ny fanabeazana ireo olom-pirenena amin’izao fampielezan-kevitra izao, hoy ny MAPAR. Tsy ireo antoko politika no manao ireny fametahana afisy tsy ara-dalàna ireny fa ireo mpametaka afisy izay olon-tsotra tsy mahafantatra ny lalana no manao izany, hoy hatrany ny Mapar. Nilaza izy ireo fa tsy maintsy hitombo ny mpifidy amin’ity fifidianana ity noho ny fisian’ny karazana kandida maro be.
Be kajikajy politika be ny fitondram-panjakana amin’ny fametrahana ny antenimieram-pirenena. Manao izay ahazoana seza betsaka izy ireo tamin’ny fandrotsahana kandidà izay efa minisitra ny ankamaroany. Ho an’ireo roa vavy minisitra tamin’ny governemanta Ntsay Christian izay nilatsaka hofidiana, tsy nisy hatramin’izao ny tena solony fa dia mpisolo toerana vonjimaika no mbola misahana ny asa kanefa dia minisitera tena goavana ny sehatry ny fanabeazana sy ny mponina. Tsapa sahady ny fitapitaka ataon’ny mpitondra.
TSY MILAMINA NY TANY AO TOAMASINA
Nampiantso fivoriana maika ny OMC ao Toamasina mahakasika ny tsy fandriampahalemana izay tena manimba ny lazan’ny tanàna. Nisy ny baiko izay nomena ny vondron’ny mpitandro ny filaminana telo tonta ny amin’ny hanamafisana ny asa fitsikilovana ireo jiolahy ary koa ny fisamborana azy ireo. Lasa faritra mena tanteraka mantsy ny renivohitr’i Betsimisaraka izay misesy ny raharaha heloka bevava kanefa tsy mety voavaha.
Taksibrosy telo karazana no sarona nitondra lavanila maitso tao anatiny. Milanja 300 kilao izany ary saika hakarina aty an-drenivohitra. Avy any Vaingaindrano sy Manakara ireo taksibrosy ireo no voasakana. Miisa efatra ireo olona nosamborin’ny polisy tamin’ity trafika ity. Mpamily ny telo ary vehivavy ny iray izay mpitondra ny entana. Mitombo ny trafikana lavanila amin’iny faritra iny amin’izao ary tena mampiasa fitaovam-piadiana izy ireo.